Bulloxer: Chii chinonzi Boxer Bulldog musanganiswa imbwa? - Inobereka
Bulloxer: Chii chinonzi Boxer Bulldog musanganiswa imbwa?
IAmerican Bulldog Boxer musanganiswa (a.k.a Bulloxer) zita raisazokwana pasina kuwedzera: wako cuddly mudziviriri, akanakisa epasirese nyika.
Iyi Bulldog Boxer yakayambuka inozivikanwa nekutyisidzira, kutarisa tsandanyama asi kuenzanisa izvo nerudo uye kuda kuti urambe uchidikanwa uye uchivaraidzwa.
Sangana neyakura Boxer neBulldog musanganiswa
Uku kusanganisa kunogona kukusiya uchinzwa sekunge wakunda iyo doggie jackpot. Ngatitarisei zvakanyanya muiyi imbwa-inotaridzika yakasimba.
Bulloxer yakabva kupi?
Chii chinonzi Bulldog Boxer musanganiswa chinotaridzika?
Pros uye Cons yeiyo Boxer Bulldog hunhu
Chii Chaunotarisira kutarisira kweBulldog Boxer
Imbwa dzine hutano here?
Kwokutenga kupi Boxer Bulldog sanganisa vana
Iyo yakasarudzika sarudzo menyu yeBulldog inosanganiswa
Zvakanakisa zvepasirese nyika… nemiimwe mibairo yakakomba
Kwete yekuvhiringidzwa neiyo Mupata Bulldog , inova Boxer uye Chirungu Bulldog musanganiswa. Iyo Bulloxer ndeye Boxer American Bulldog musanganiswa.
Vaberekesi vangangodaro vakarera Bulloxer kuve nehungwaru, inotyisa imbwa yekuchengetedza.
Vabereki vese vanobva kunhamo yekushungurudza imbwa muzana re19th century Europe.
Anovimba American Bulldog mubereki
Sangana nechena American Bulldog puppy
IAmerican Bulldog mwana wedzinza rayo reChirungu reBulldog, iro raive nerakaipisisa rekare rekuzvarwa uye raishandiswa pakurwisa uye kubhejera nzombe kusvikira iyi mitambo inosiririsa yakarambidzwa muma1830s.
Mushure, vafudzi vakatanga kutendeuka matafura uye kupfuya imbwa idzi semboni dzemhuri imbwa pane varwi.
IAmerican Bulldog inotangisa mutsara wayo kudzoka muzana ramakore rechi17 America. Ivo vangangodaro vakatanga kuunzwa kuUnited States muma1800s sembwa dzinoshanda nevaridzi vadzo vanobva kune dzimwe nyika.
Rudzi urwu rwakauya nevarimi vaishandisa simba rembwa idzi uye mafungiro ekudzivirira kuchengetedza nekuchengetedza ivhu nemhuka.
Iyo AKC inoona imbwa idzi sechikamu che Nheyo Stock Service Boka .
Hadzi dzinorema 60-80 mapaundi (27 kusvika 36 kg), uye varume vanorema 75-100 mapaundi (34 - 45 kg). Vanomira vakasimba pamasendimita makumi maviri neshanu (makumi mashanu neshanu), vakadzi panopfupika penzvimbo iyi.
Hunhu hwavo hwemhasuru hunopa kuzvivimba kwavo, pamwe nesimba uye kutsungirira, sezvavaimbove imbwa dzinoshanda mumapurazi.
Hupenyu hwehupenyu hweBulldog ingangoita makore gumi nemaviri.
Iyo Goofy asi isingatyi Boxer Mubereki
Iyo goofy Boxer imbwa
Idzi imbwa dzinotapira uye dzinotamba dzave rudzi rwunodiwa rwakamira kureba pa # 14 mukati AKC inobereka mukurumbira . Iyo AKC inovaona seKushanda imbwa dzinza.
Idzi imbwa dzakadzokera kunguva dzekare kubva kumadzitateguru avo anovhima shumba- zvakaoma kufungidzira aya anonakidza-anotaridzika anotapira achivhima katsi hombe hombe!
Iyo Wetsiva isu tinoziva nhasi zvingangodaro zvakatangira kubva Imbwa dzeGerman Bullenbeisser muma1800s. Munguva dzekare, imbwa idzi dzaivhima mhuka hombe senge bison nebere.
Mabhokisi akange achishandiswa zvinobudirira sembwa dzemauto, imbwa dzerapi, kufudza, uye imbwa dzinorinda. Iye Boxer ishamwari isingatyi, inodzivirira inofamba nezvose simba nenyasha.
Bhokisi rakakura rakazara rinogona kurema zvinosvika mapaundi 65-80 (29-36 kg), nevakadzi kazhinji vachirema mapaundi gumi nemashanu pane mumwe murume. Dzinomira pamasendimita 21.5 kusvika 25 (55-64 cm) pakukwirira.
Majasi avo mapfupi anowanzo kuve fawn kana brindle ine machena mamaki. Hupenyu hwavo hunotarisirwa makore 9-12.
Kana hupenyu uhwu hukakuodza moyo, asi iwe uri murudo neanotamba mutambi wetsiva, unogona kufunga a Boxer Lab musanganiswa , inozivikanwawo seBoxador.
Iyo imbwa yakakwana iri pakati nepakati ine simba rakawanda uye inoda kupa sekusanganiswa kwemarudzi maviri anoshanda nesimba. Hupenyu hwavo hwakareba hwakareba kupfuura hweBulloxer, pamakore gumi nemaviri kusvika gumi nemashanu.
Sangana neBulldog Boxer musanganiswa - Mufananidzo sosi
Kunyange kuoneka kwakawanda kwemasanganiswa kuchinetsa kufanotaura, Bulloxer haina kushamisika sezvo vese vabereki vane hunhu hwakafanana.
Iyo mhando inowanzo kuve ipfupi, floppy nzeve uye yakafara, jowly mhino. Vanodedera t hick chipfuva uye musoro wakaenzana izvozvo zvinowedzera pakuonekwa kwavo kunotyisa.
Iwo miswe mirefu-yepakati asi inowanzo docked. A pfupi muromo nechishuwo chishoma chakagara nhaka kubva kumubereki wavo weBoxer ndiye chaiye Cherry ari pamusoro kana iwe ukandibvunza- zvinounza goofy yavo, yakapfava divi pakuonekwa kwavo kwese.
Imbwa idzi dzinokura zvakadii?
Idzi imbwa yakakura , inorema kuita 70-90 mapaundi (31-40 kg) uye kumira wakareba pa 22-27 inches (56-69 cm).
Nepo idzi imbwa hombe, ivo vari inochinjika kugara mufurati sekureba sekugona kwavo kuwana paki kana yadhi padhuze uye vanogamuchira yakaenzana huwandu hwekurovedza muviri.
Nguo uye ruvara rweichi chakayambuka
Idzi imbwa dzinowanzo dzive pfupi, dzakakora majasi- nhau dzakanaka dzevaridzi pakutsvaga mhando ine yakaderera yekugadzirisa yekushambadzira inoda.
Kunyange vari kuderera-kuderera , ivo vari kwete hypoallergenic.
Nguo dzavo dzichauya nemavara senge machena, akajeka brown, brindle, kana fawn. Sezvo maBoxers anowanzo kuve nawo mavara machena padhuze nepachipfuva chavo uye kumeso, iyo Bulloxer inogona kugara nhaka iyi inoyevedza chitarisiko.
Iyo Nyoro Yevarindi Imbwa: Iyo Pros
Ivo vane kutyisa kutaridzika uye kugadzira imbwa dzinorinda sezvavanodzivirira zvisingaite varidzi vadzo.
Usarega chimiro chavo chakaomarara chichikupusisa- iwo mirwi mikuru yehwa mushori vanonamata vatenzi vavo uye vanosarudzika nyoro uye murwere nevana.
Sangana neBoxer Bulldog musanganiswa - Mufananidzo sosi
Ungwaru hwavo hunovaita nyore kudzidziswa uye inogona kubata nekukurumidza kune kunodiwa kwekutanga kuteerera kudzidziswa uye kushamwaridzana kubatsira kuchengetedza mutungamiriri wavo wepaketi kufunga kuchikwanisika. Kudzidzisa Clicker isarudzo yakanakisa yerudzi urwu.
Ivo vanonakidza, vane simba shamwari dzekutamba nadzo mitambo masikati. Ivo vatambi venyama!
Kuti uwane zano riri nani rekuti imbwa idzi dzinonakidza sei, tarisa vhidhiyo iyi yeKimble, American Bulldog Sanganisa netarenda remimhanzi:
Bulloxer kana Bulldozer ?: Iyo Cons
Idzi imbwa hadzigone kuvimbwa nadzo pamba dzoga kwenguva refu. Vanogona kuzova vanoparadza kana kufinhwa- kutaura pamusoro penzira inopandukira!
Iyo yakayambuka inobata Kuparadzanisa kunetseka , inogona kunge iri iyo kukonzera maitiro aya . Zvakaoma kuti vagamuchire kuti unodzoka paunobva– vangatoda kuva newe vega 24/7.
Bulldog Boxers inoda zvinopfuura muridzi; vanoda shefu. Ivo vane simba-chishuwo zvekuti kana iwe usina kuzvivimba zvakakwana, ivo vachatonga -kana roll-- chaipo pamusoro pako.
Bulloxer inogona kunge iine simba rakawanda kupfuura rainogona kubata. Ivo vanogona kuwana super rowdy, kusvetuka uye kumhanya vachitenderera. Saka, kunyangwe ivo vakanaka nevana, havafanirwe kusiiwa vasina kuchengetwa.
Idzi imbwa dzinogona kusawirirana nedzimwe imbwa hombe, saka kana iwe uine vamwe mumba mako kana kuronga kuva nembwa dzakawanda mumba mako, rudzi urwu runogona kunge rusiri rwewe.
Yakadzika Yekugadzirisa Kushambidzika
Idzi imbwa dzakaenzana yakaderera Nokuraramisa uye zvichave zvakanaka nekukwesha majasi avo kamwechete pasvondo pamwe nekugeza chete pazvinenge zvichidiwa.
Nekuda kwemajasi avo mapfupi, imbwa idzi havashiviriri zvekunyanyisa kutonhora mamiriro ekunze.
Kugara uchichenesa meno kwakakosha. Sezvineiwo, izvi zvinofanirwa kuitwa mazuva ese. Asi tanga nekutsvaira kakawanda sezvinobvira- dzimwe imbwa ruvengo izvi!
Vazhinji varidzi vembwa vanowanzo tarisa canine yavo canines, asi kushomeka kwehutsanana hwemeno kunogona kukonzera zvakawanda nyaya dzakakomba sechirwere chemwoyo.
Usaregeredze nzeve dzako dzeBulloxer! Vachenese kamwe kamwe pasvondo nekotoni bhora uye imbwa-yakanangana nzeve mhinduro yekudzivirira wakisi kuwanda, izvo zvinogona kukonzera hutachiona.
Sezvo imbwa idzi dzinofarira kumhanya panguva yekutamba, zvakakosha kunyatso tarisisa nzara dzadzo. Vanogona kutyora zviri nyore izvo zvisingagone kungorwadza chete asiwo zvinokonzeresa hutachiona.
Kutamba Exercise Zvido
Bulloxers imbwa dzine simba dzinoda 30-45 maminetsi yemitambo yekutamba zuva rekuchengetedza yavo yakasimba, yemitambo inovaka.
Ini ndoda kucherechedza kuti hombe-dzakapfekerwa imbwa dzinotarisana ne chakakomba uye chinouraya mamiriro inonzi bloat, inowanzo kuunzwa kubva kukurumidza-kukurumidza kudya huwandu hwakawanda hwechikafu kana kurovedza muviri kwakanyanya mushure mekudya.
Nechikonzero ichi, zvakakosha kuti iwe upe yako bulloxer imwe nguva yekugaya (30 mins-1 awa) mushure mekunge vadya vasati vavarega vachimhanya.
Iyo Kudya-inoda Imbwa Kudya
Iyo yakazara yakakura Boxer Bulldog musanganiswa inoda nezve 3-4 makapu echikafu chakaoma zuva, kupatsanurwa pakati pe 2-3 kudya.
Idzi imbwa dzinotarisana nenyaya dzekubatana, kuve nechokwadi chekutora imbwa chikafu chine mavitamini uye zvese zviri zviviri chondroitin uye glucosamine .
Idzi imbwa inowanzoita kufutisa, saka namatira kuhurongwa hwakasimba hwekudyisa uye chengetedza zvekudya zvishoma, uine hutano hwakaringana hwechikafu uye kurovedza muviri.
Mabhokisi ane zvido chaizvo, saka zvingave zvakanaka kupa chikafu chakanangana neBoxer.
Crossbreeds inogona kugara nhaka chero ehutano hwevabereki vayo. Muchiitiko cheBulloxer, vabereki vese vane runyorwa rurefu rwe njodzi dzehutano iwe dzaunofanirwa kuziva nezvadzo, saka kuongorora kwekutanga kwenyaya idzi kwakakosha kune ese matanho ekudzivirira uye kurapwa kwekutanga.
Izvi hazvireve kuti mudiwa wako Bulloxer anozopedzisira aguma nematambudziko ehutano aya, asi zvinogara zvakanaka kuti uzive mikana yekuziva.
Mabhokisi anotarisana nenjodzi huru dzehutano senge gomarara (rakazara zvakare muBulldogs) uye Epilepsy. Zvimwe zvinosanganisira:
arrhythmogenic kurudyi ventricular cardiomyopathy
Bloat, sezvandambotaura, inova njodzi huru kune imbwa dzakakura-dzakapfuurwa.
Bulldogs vane yavo inoshamisa rondedzero yehutano njodzi. Sezvo vari Brachycephalic imbwa, ivo vanowanzo netsa nenyaya dzakabatanidzwa nezvipfupi zvavo senge kufema kunetseka uye kupisa zvakanyanya.
Bulldogs inokanganisa kurwara uye dzakasiyana siyana dzeganda, senge eczema . Ivo vanotamburawo nenyaya idzi:
Degenerative Spine Chirwere
idiopathic musoro kudedera
Bulloxer's avhareji yehupenyu, tichifunga nezve hupenyu hupfupi hwevabereki vese uye neyekuwachisa rondedzero yezvingaitika nyaya dzehutano, zvinosuruvarisa chete Makore 10-15.
Sangana neBoxer Bulldog sanganisa vana - Mufananidzo sosi
Zvinosuruvarisa, mazambuko mazhinji anopedzisira ave mumatumba. Ndinokukurudzira: gamuchira; usatenge! Kune dzakawanda dzakavimbika, imbwa dzine hutano dzakakodzera dzimba dzakanaka.
Breeder sarudzo kana uchifanira
Kana iwe zvachose uchifanira kutenga kubva kumuchengeti, ini ndinokurudzira kuita yakanyanya kutsvagurudza zvisati zvaitika uye kubvunza mibvunzo chaiyo- vafudzi vazhinji vanongo vharidzirwa mbwanana zvigayo.
Mimwe mibvunzo yekubvunza anogona kuberekesa ndeiyi:
Ndeapi maitiro ako ekunyorera maitiro uye zvinodiwa?
Unotora kupi imbwa dzako?
Ndeapi matanho ako ekuongorora hutano?
Ndiani chiremba wako anoshanda?
Ndeapi matanho ako ekutevera-uye zvaunoda mushure kugamuchirwa? Ndeapi mhando yekutevera-zviwanikwa zvaunondipa?
Uchaita kangani kana kubereka amai nababa kubva mumarara aya? (uyu mubvunzo wakakosha nekuti mhinduro kune chero ane mutoro, ane mukurumbira wekubereka anongova chete Poshi nguva.)
Bulloxer vana vanowanzoita $ 900- $ 1000. Uye Bulloxer litter saizi akajairwa 6-10 inonakidza madiki madiki.
Heano mamwe anozivikanwa eBulldog uye maBoxer vafudzi andawana:
Mukati Mabhangi Mabhokisi eBlounts Creek Farm (North Carolina)
Southeast Boxers yaAmy (Florida)
Nzombe Dhonza American Bulldog (Maryland)
Grand Ramangwana American Bulldog Kennel (Ohio)
Bulldog Boxer Sanganisa Kununura
Ini ndawana anonunurwa mashoma ane mbiri uko iwe kwaunogona kuwana aya anoyevedza masanganiswa Iwe unogona kukwanisa kuwana chero Bulldog kana Boxer musanganiswa kununura kwemarudzi ese:
Hutsva Hupenyu Boxer Kununura (NJ)
Ohio Boxer Kununura
GO Boxer Kununura
Connecticut Humane Sosaiti
Mushure mekutsvagisa kwakadzama kwevabereki vaviri veBulloxer, ini handingakurudzire izvi seimwe yesarudzo dzerudzi zvine hutano.
Izvi zvinonyanya kukonzerwa neakawanda ezvehutano nyaya kubva kumubereki wayo weBulldog. Asi kana iwe wakagadzika pane hunonakidza-hunodzivirira uye hunodzivirira hunhu hweBoxer, saka ungangoda kutarisa mamwe eaya mamwe misiwo yakajairika nezvitupa zviri nani zvehutano:
Antebellum Bulldog Boxer musanganiswa - iyo Antebellum Bulldog yakafanana zvikuru neAmerican, asi iine musoro wakafara uye chimiro uye kazhinji mashoma matambudziko ehutano. Ivo vanogona kuyera 55-120 mapaundi uye kumira pane angangoita 18-26 inches. Rudzi irworwo haruwanzoitika zvekuti pane ruzivo rwushoma pamusoro pavo, asi hupenyu hwavo makore gumi nemashanu.
Mutambi wetsiva anokunda Bulldog musanganiswa - Yekukunda Bulldog yakanyatso kuberekwa kuve nehutano hutano hweBulldog, iyo yakazove yakabudirira zvikuru. Ivo 55-75 mapaundi uye 16-19 inches. Kunyangwe ivo vachidurura zvine mwero, idzi dzakangwara, dzinodakadza imbwa hupenyu hupenyu hwakareba kupfuura Bulloxer pazera gumi nemana.
Tarisa uone inoyevedza Victorian Bulldog Boxer musanganiswa kuungudza:
Hazvina mubvunzo kuti Bulloxer musanganiswa wakapfava weunyoro uye unmatched kudzivirira - asi handifunge kuti zvakaringana.
Ivo vanoda vanhu uye havagone kungoenderana nemamiriro ekurarama asi chengetedza nzvimbo yako uye nevana sekunge ibasa ravo.
Zvisinei, nehupenyu hwavo hupfupi uye hutano, handigone kuvakurudzira-- ungazopedzisira warwadziwa nemoyo kune iwe neshamwari yako yepamwoyo.
67 Imbwa Puns Iyo Ichaita Pawsitively Kukuita Iwe Ungudza
mufudzi nembwa musanganiswa wembwa
german shepherd imbwa nhema uye tani
shih tzu uye yorkie musanganiswa
bull mastiff yellow lab mix